Home News Magaalada Malmö oo lagu toogtay labo wiil oo dhalinyaro ah (Faahfaahin)
Magaalada Malmö oo lagu toogtay labo wiil oo dhalinyaro ah (Faahfaahin)
Wiil 15 jir ah ayaa lagu dilay is rasaasayn ka dhacday Malmö. Wiil kale oo da ‘yar ayaa isna lagu dhaawacay toogashadaasi sida ay sheegeen Booliska.
Dad badan ayaa goobjoog ka ahaadhacdada, laakiin qofna looma qaban weerarka dhacay
“Waxaan xaqiijin karnaa in wiil 15 sano jir ah uu dhintay,” ayuu yiri Patric Fors, afayeen u hadlay booliska.
Ma heli karo markuu wiilku dhinto, ama wax faahfaahin ah kama odhan karo duruufaha ku saabsan geerida wiilka lakin waxaan ku wargalinay Qoyskiisa.
Wiil kale oo dhalinyaro ah ayaa la toogtay waxaana la sheegay inuu qabo dhaawacyo halis ah sida ay sheegayaan waaxda caafimaadka ee gobolka Skåne.
– Waxba kama dhihi karo qofka kale. Waxan tixraaci karaa daryeelka caafimaadka si macluumaad looga helo, ayuu yidhi Patric Fors.
Bilayska ayaa helay digniin ku saabsan qof dhaawac ah kadib rasaas ka dhacday meel maqaayad ah oo ku taal Möllevångstorget saacaddu markay ahayd 21-ka fiidnimo ee xalay oo Sabtida ah.
Bilayska ayaa hadda dib u eegi doona Qalabka kaamirooyinka ilaalinaya Möllevångstorget iyadoo xalay la xiray dhoor meel oo magaalada ah.
– Toogashadan ayaa ka dhacday meel ay dad badani ku sugnaayeen, waxaanan ku qabanay markhaatiyaal meesha ku sugnaa, sidaas awgeed faahfaahin dheeraad ah ayaa laga yaabaa inay gadaal ka yimaadaan, ayuu yidhi Patric Fors.BrBrqn